Tun Tun's Photo Diary: February 2014
ဒီပို.စ် ကို အရင် က အပိုင်းလိုက် ခွဲပြီး ၂၀၁၁ တုန်းက ခရီးက ပြန်ေ၇ာက်ေ၇ာက်ချင်း တင်ဖူးပါတယ်။ အခု တောင်ကြီး ပို.စ်နဲ. တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားအောင် ပိုစ်.ခွဲထားတာတွေ ပြန်စုပြီး၊ မြန်မာလိုလဲ ပြန်ေ၇းပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
We are driving from Taungyi to Htan San Cave which is newly found cave and people rarely visit there. People don't like to go there because the road to Htan San cave is quite dangerous. So many turns, narrow road and very hard to see incoming vehicles.
တောင်ကြီးမှာ နေ.လည်စာ စားပြီး ထန်ဆမ်းကို ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ အထင် တောင်ကြီးကနေ အလွန်ဆုံး သွားရ ၁နာရီလောက်ဆိုပြီး တွက်ထားတာ။ မောင်း၇င်း မောင်း၇င်း မေ၇ာက်နိုင်ပါဘူး။ လမ်းက ကြမ်းပါတယ်။ အခုတော့ ကောင်းသွားပြီလား မသိဘူး။
This is the Taungyi Computer University we saw on our way to Htan San cave.
at 2/28/2014 10:53:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Htan San, Myanmar, Taungyi
Taungyi is the capital of Shan state. We arrived here about2pm. On our way, we visited the well-known suspension bridge and the park which also have some wild animals. After that we had lunch at Maw Khan (Shan restaurant) which serves delicious Shan cuisines.
To secureaplace to sleep for that night, we went to check-in at Shwe Ngar Hotel (Gold fish hotel) before visitng to Htan San cave. It took us about2hrs to drive from Taungyi to Htan San Cave and it is really far. If we knew that early, we might not visit that place as we were already too tried after visiting Pindaya cave earlier.
ပင်းတယ ကနေ တောက်လျှောက်မောင်းလာလိုက်တာ တောင်ကြီးမြို.ကို နေ.လည် ၂ နာရီလောက်ဝင်ပါတယ်။ အကွေ.အကောက် တောင်တွေတက်ပြီးတော့ ရောက်သွားပါတယ်။ တောင်ပေါ်လမ်း ကနေ တောင်အောက် ကို လှမ်းမြင်ရတယ်။ အဝေးက တိမ်တွေက အောက်မှာေ၇ာက်နေတယ်။
ကားဆ၇ာကို မှာထားတယ် တောင်ကြီးေ၇ာက်ရင် ကြိုးတံတားနားမှာ ၇ပ်ပေးပါလို.။ မြို.ထဲ ၀င်ပြီး ခဏလေးပဲ အဲဒီနေရာကို ရောက်ပြီဆိုလို. ကားပေါ်က ဆင်းပြီး ၀င်သွားတယ်။ အဲဒီကို သွားဖို. ပန်းခြံ၊ဥယာဉ်လို နေရာမျိုးကို ဖြတ်သွားပြီးမှ သွားရမယ် ဆိုလို. ၀င်ကြေးပေးပြီး အဲ့ပန်းခြံထဲဝင်သွားတယ်။
at 2/26/2014 06:09:00 AM Links to this post 1 comment:
After spending about 1 hour inside the cave, I walked around the cave to observed the place and the people live in this area. There is one hotel, souvenir shopျ and tea shop near the cave. I am not sure who will stay in that hotel because most of the visitors will come here from Kalaw or Inle Lake foraday trip only. If you walk to the left side of the cave (near the hotel) you will findafew giant trees. The place itself is very clean and green, may be the population is low.
We bought some local products from the souvenir shop and left this place. From here, we drove back to Nyaung Shwe and then go to Taungyi (The city of Shan State). It tooks about2hours to reach Taungyi I guess.
ပင်းတယ လှိုဏ်ဂူမှာ ၁နာ၇ီလောက် လျှောက်ကြည့်ပြီးတော့။ လှိုက်ဂူကနေ ထွက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေ ရှိလဲ လေ့လာပါတယ်။ အောက်မဆင်းခင် အပေါ်စီး က ဟောဒီလို ၇ူခင်းတွေ တွေ.ရတယ်။ေ၇ှ.တည့်တည့် မှာ စေတီလေးတွေ အစုလိုက် ၊ ညာဘက်မှာ ဂေါ်ဖီ စိုက်ခင်း၊ ဟိုးဘယ်ဘက်မှာ ရေကန်ကြီး (ပုန်းတလုပ်ကန် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်)။
at 2/21/2014 08:00:00 PM Links to this post4comments:
Labels: Food, Landscape, Myanmar, Myanmar Food, Pindaya
On 07-Feb-2014, Friday, I went to Chingay Parade at Singapore Flyer. I gotafree ticket from my friend so I was keen to go for photo shoot. Two year ago, I watched the parade from the free standing area and the photos were not great.
စင်ကာပူ နဲ. မလေးရှားမှာ တ၇ုပ်နှစ်သစ်ကူး ပြီးတိုင်း Chingay Parade ဆိုတာ လုပ်ကြတယ်။ ရိုးရာဝတ်စုံတွေ ၀တ်ပြီး ကတဲ့ ပွဲဆိုပါတော့။ စင်ကာပူမှာက လူမျိုးပေါင်းစုံနေတော့ နိုင်ငံပေါင်းစုံက ရိုးရာဝတ်စုံတွေနဲ. ပါဝင်ဆင်နွဲတာတွေ.ရပါတယ်။ မလေးရှားမှာတော့ တ၇ုပ်၇ိုးရာ ကို ပဲ အဓိကထား ပြီး ဆင်နွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီပွဲ ကို ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ဖို. စိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ ဘာလို.လဲ ဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က အလကားကြည့်လို. ရတဲ့ နေရာကနေ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ထားတာ ပုံတွေ မကောင်းလို. ထပ်ပြီး ရိုက်ချင်စိတ်မ၇ှိတာပါ။ ဒီမှာ ကြည့်လို.ရပါတယ်။
There isafree goodie bag which includes water, sweets, tower, disposal raincoat, cheer stick, writing pad, small bag and plastic garden scoop on every seat.
ဒီနှစ်တော့ ကျွန်တော့် ရဲ. အသိတစ်ယောက်က လက်မှတ်အပိုတစ်စောင်ရှိတယ်။ ထိုင်ခုံနေရာ ကောင်းတယ် ဆိုလို. သွားရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေ ၆နာရီခွဲလောက်ေ၇ာက်သွားတယ်။ လတ်မှတ်ပြပြီးဝင် သွားတယ်။ လတ်မှတ်မှာ ထိုင်ခုံနံပါတ်ပါတယ်။ အဲ့အတိုင်း ထိုင်ရပါတယ်။ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ လက်ဆောင် ပစ္စည်တွေ အဆင်သင့် ချထားပါတယ်။
လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေ ကတော့
- ဆွယ်တာ ပုဝါ
- မီးထိုးတဲ့ ဓါတ်မီး
- တခါသုံး မိုးကာ ၂ထည်
-ေ၇သန်. နဲ. ချိုချဉ် ၃လုံး
- အပင်စိုက် ရင်သုံးတဲ့ မြေဆွ တဲ့ ဂေါ်ပြား တခု
- Writing pad နဲ. ပိုက်ဆံအိတ်လို အိတ်လေး တခု
- Cheer stick
လက်မှတ် အလကားရတဲ့ သူအတွက်တော့ အရမ်းကို တန်ပါတယ်။း)
at 2/15/2014 09:19:00 PM2comments:
Labels: Event, Night, Singapore
In this post, you can see everything inside the Pindaya Cave. There are thousand of Buddha statues and I think it is over-crowded. Inside the cave, it is quite dark to take photo unless you use tripod or flash. It will take about an hour to explore inside the cave.
ပင်းတယဂူကို ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ေ၇ာက်ဖူးတာပါ။ေ၇ာက်ဖူးတဲ့ လှိုဏ်၈ူ ဆိုလို. ပြင်ဦးလွင်က ပိတ်ချင်းမြောင် ပဲ ရှိတယ်။ အမှန်က ထန်ဆမ်း၈ူ ကို အခု ပင်းတယသွားပြီးမှ သွားတာ။ ဒါပေမယ့် ထန်းဆမ်း၈ူ ပို.စ်ကို အ၇င်ကတင်ပြီးသွားပြီ။ ဒီမှာ က ဂူထဲမှာ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေ ပိုများတယ်။ ပြွတ်နေတာပဲ။
ဓါတ်ပုံတွေကလွဲပြီး ထူးထူးခြားခြားေ၇းစ၇ာမရှိလို. ပုံတွေ ပဲ Share လိုက်ပါတယ်။
at 2/10/2014 10:48:00 PM No comments:
Labels: Myanmar, Pindaya
at 2/05/2014 05:52:00 PM7comments: